WHO oo Cudurka ka dillaacay Shiinaha u aqoonsatay xaalad deg-deg ah – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA WHO oo Cudurka ka dillaacay Shiinaha u aqoonsatay xaalad deg-deg ah
Hay’adda Caafimaadka Adduunka ee WHO ayaa Caabuqa ka dillaacay Shiinaha (Coronavirus) u aqoonsatay xaalad deg-dedeg ah oo Caalami ah, kadib kulamo iyo baaris ay sameysay Hay’adda.
Tedros Adhanom, oo ah Madaxa Caafimaadka WHO ayaa sheegay in sababta xaaladda deg-degga ah loogu dhawaaqay aysan ahayn Shiinaha oo kaliya, balse ay tahay sida uu ugu sii faafayo Caalamka intiisa kale.
Dadka u dhintay Cudurka Shiinaha ayaa hadda gaaray 170 Qof, waxaana walaac laga qabaa in uu saameeyo Dalalka aan awoodda u lahayn in ay ka hortagaan ama aan haysan adeeg caafimaad oo tayeysan.
Warbixinta Hay’adda ayaa sheegeysa in ku dhowaad 100 kiis oo la xiriira cudurka laga helay 18 Waddan, inkastoo Dalalkaas aan dhimasho laga soo sheegin.
Magaalada Wuhan ayaa go’doosan, iyada oo Dowladda Shiinaha kordhisay adeegyada xagga Caafimaadka ah ee loo fidinayo Dadka laga helay calaamadaha cudurka coronavirus.
Dalka Shiinaha oo keliya dhimashada ayaa haatan gaareyso 213 Qof, waxaana Kiiska laga helay Dad gaaraya 9.672, halka Waddamada uu ku faafayna ay gaarayaan 18 Dal, waloow ay jirto baqdin ah in uu sii baaho.
VILLA SOMALIA oo go’aan ka soo saartay xiriir dhex mara Somalia...